Fanavaozana ny fango RisingVoices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:53 GMT
Fango RV niandohana. Gill tsy misy soratra, adinkra miakatra ery amin'ny faravodilanitra.
Ireo karazana sary famantarana notsongaina tao amin'ilay Noun Project, loharano goavana raha resaka sary famantarana ampiasàna lisansa malalaka arahana zaraasa fikarohana mitondra ho amina fieritreretana iray manome anao vokatra mahaliana rehefa mikaroka ny toy ny hoe “community” sy “help“.
Karazany iray ahitàna tànana vitsivitsy miaraka misandratra. Heveriko fa ity no tsaratsara kokoa ho an'ny Rising Voices noho ny hoe tànana tokana monja. Tsy misy hafa amin'ilay fangon'ny Voices Without Votes fahiny, nefa tsy voatery ho zavatra ratsy an!